400 kaloori cunto ah: waa sidee, menu maalinle iyo todobaadle ah | Cuntada Nutri
Ancaro | | Cuntada, Caafimaadka
Kani waa cunto loogu talagalay dadka doonaya inay lumiyaan lacagtaas dheeriga ah. Waa nidaam aad kudareyso qadar yar oo cunto ah, waxay kuu ogolaaneysaa inaad miisaankaaga dhinto inta udhaxeysa 4 ½ iyo 5 ½ kiilo 10 maalmood gudahood. Waa inaad xakameysaa kalooriyada aad ku darto maadaama aysan ka badnaan karin 400.
Haddii aad go'aansato inaad cuntadan dhaqan gasho, waa inaad yeelataa xaalad caafimaad oo caafimaad leh, cabtaa inta ugu badan ee suurogal ah maalin kasta, ku dar dhalooyinkaaga macaaneyaha oo ku kari cunnadaada milix iyo saliid keliya.
1 Intee in le'eg ayaad ku luminaysaa cuntada kaloriinta ah ee 400?
2 Liiska maalinlaha ah
3 Liistada toddobaadlaha ah
Intee in le'eg ayaad ku luminaysaa cuntada kaloriinta ah ee 400?
Waa run in cuntada noocaas ah, kalooriyadu aad uga hooseeyaan sida aan u maleyn karno. Marka haddii aan raacno qorshaha warqadda waxaan waayi karnaa ilaa 4 ama 5 kiilo usbuucii. Laakiin haa, waxaa ugu fiican in la sameeyo cuntada kaloriinta ah ee ah 400 ilaa 8 ama 10 maalmood oo keliya.
Mar dambe, waxaan ku dari karnaa tiro badan laakiin had iyo jeer cuntooyinka aan kugula talinno. Sidan oo kale, jidhku wuxuu nuugaa nafaqooyinka, borotiinka ama fiitamiinnada uu u baahan yahay, laakiin had iyo jeer wuxuu xakameynayaa arrinta miisaanka.
Liiska maalinlaha ah
Desayuno: 1 faleebo aad dooratay oo lagu jarjaray caano aan badnayn iyo 1 rootiga rootiga oo dhan.
Aroortii: 1 yogurt dufan yar leh miraha.
Qado: maraq jilicsan, 1 qaadasho oo aad dooratay salad khudrad ceyriin ah iyo 1 aad dooratay oo miro ah. Waxaad cabi kartaa qadarka maraq aad rabto.
Galab dhexe: 1 koob oo liin dhanaan ah ama casiir canab ah.
Cunto fudud: 1 faleebo aad dooratay oo lagu jarjaray caano aan badnayn iyo 2 buskud biyo ah ama buunshiil fudud.
Casho: maraq jilicsan, 50g. digaag, kalluun ama hilib, 50g. jiis salaan, 1 qayb oo saladh isku qasan ah iyo 1 qayb oo ah gelatin khafiifa. Waxaad cabi kartaa qadarka maraq aad rabto.
Kadib casho: 1 faleebo oo aad dooratay.
Liistada toddobaadlaha ah
Noocyada noocan ah, ee aan uga hadlayno ku darista kalooriyada jirka aad u yar, waxaa kaliya oo loo sameeyaa waqti ku habboon. Taasi waa sababta ay ugu saabsan tahay waxa loogu yeero cunnooyinka degdegga ah. Maxaan ku helaynaa? ka takhalus dhawr kiilo oo dheeri ah. Laakiin waa run in maadaama oo meydadka oo dhami isku mid ahayn, mararka qaarkood xitaa waxaan waayi karnaa wax ka badan intii aan ka fikirnay. Dabcan, waa inaanan waligeen iska dhaafin cuntooyinka sidan oo kale ah. Had iyo jeer way fiicantahay inaad sameyso maalmo yar ka dibna aad si joogto ah wax u cunto laakiin had iyo jeer caafimaad iyo isku dheelitiran si aad u ilaaliso culeyskeena.
Waxaan kaaga tagi doonnaa liiska toddobaadlaha ah si aad u codsan karto cuntada kaloriinta ah ee 400 si wax ku ool ah oo fudud:
Quraac: sacab muggiis oo badar dhan leh 200 ml oo caano dufan ah.
Cuntada: Saxan wanaagsan oo saladh iyo qajaar ah
Cunto fudud: Jelly light
Casho: Saxanka broccoli la kariyey oo leh yogurt la shiiday
Quraac: Faleebo iyo jeex ka samaysan rootiga oo dhan qamadi oo leh shaaha oo ah malmalaado fudud
Subax-dhexe: Liin dhanaan
Qadada: Baaquli maraq ah oo leh sacab muggeed oo baastada qamadiga ah
Cunto fudud: yogurt la shiiday
Casho: 75 garaam oo digaag ah oo leh salad isku dhafan
Quraac: Faleebo ama qaxwada kaligeed leh roodhida qamadiga ah iyo laba xabo oo naaska turkey ah
Subax-dhexe: Waa miro
Qadada: 95 garaam oo hilib lo'aad la dubay oo leh yaanyo iyo saladh isbinaaj
Cunto fudud: koob strawberries ah
Casho: salad isku dhafan, jiis yar iyo jel fudud
Quraac: galaas caano aan badnayn leh oo leh miro dhan
Qadada: sacab muggiis oo misir leh chard
Cunto fudud: Midho ama jelly
Casho: maraq khudradda fudud ah iyo yogurt la shiiday
Quraac: galaas casiir dabiici ah ama kafee kaligiis ama faleebo lagu daray miro dhan
Mid-subax-dhexe: Midho canab ah
Cunto: Salad leh 125 garaam oo kalluun duban ama la dubay ah.
Cunto fudud: Waa shukulaato muhiim ah
Casho: Salad leh isbinaajka, iniinyaha bean iyo yaanyada ama karootada. Waxaad ku qurxin kartaa casiir yar iyo qaado qaado oo saliid saytuun ah.
Quraac: Hal galaas oo shaah cagaaran ah oo leh laba xabbadood oo rootiga rootiga ka samaysan
Subax-dhexe: Koob xabiibo ah
Cunto: 100 garaam oo turkey ah oo leh broccoli uumisay
Cunto fudud: Midho
Casho: maraq qudaar iyo caano fadhi
Quraac: Hal koob oo caano dufan ah ama faleebo iyo laba buskud oo aan sonkor lahayn
Cunto: 20 garaam oo bariis bunni ah oo leh chard ama isbinaaj
Cunto fudud: Canab canab ah
Casho: Arugula iyo salad celery leh jiis cusub.
Xusuusnow inay tahay inaad biyo badan cabto iyo in faleebooyin lagugula taliyo markasta oo aad rabto. Waxaad sidoo kale qaadan kartaa maraq fudud oo macmal ah markaad ubaahantahay. Saladhyada iyo waliba kaluunka ama hilibka waxaa lagu carfin karaa xawaash. Marka aad karinayso waxaad ku dari kartaa qaado oo saliid saytuun ah, duhurkii iyo cashada labadaba, taas oo ah, ugu badnaan laba qaado maalintii. Maahan cuno lagu taliyay dadka leh kharash badan oo tamar ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cuntada Nutri » Cuntada » 400 kalooriye ah
400 kaloori? Waa waxa ugu qosolka badan ee aan maqlo waxayna ila tahay aniga masuuliyada ugu weyn in noocan arxandarada ah ee lagu faafiyo internetka cunnadan ayaa ah qashin inkasta oo qofka celceliska ah uu waayi karo 5 kiilo todobaad gudihiis taas oo aanan shaki ka qabin inay lagaa tagi doono dhamaan dheecaanka jirka ee aad bogsato maalmo gudahood, intaas waxaa usii dheer inaad kharribto dheef-shiid kiimikaadkaaga oo u badalaya mashiin gaabis ah mustaqbalka fogna macquul maahan inaad lumiso miisaan badan ilaa aad rabto inaad isku aragto lafo aan muruq lahayn. waxa ugu fiican ayaa ah inaad si tartiib tartiib ah hoos ugu dhaadhacdo oo aad iska indhatirto noocaan ah cunno khaldan.
Runtu waxay tahay iyadoo lagu kaabayo fiitamiinno fara badan si loo hubiyo qaadashada maalin kasta ee nafaqeeyayaalka yar yar, cunno kasta oo xaddidan waxay ku shaqeysaa muddada gaaban, wax kasta oo aad cunto (xitaa haddii ay tahay burger dufan ah oo 400-kaloori ah maalintii). Si kastaba ha noqotee, isticmaalka miraha iyo khudradda ayaa faa'iido weyn u leh caafimaadka maaddaama ay leeyihiin waxa loo yaqaan 'phytonutrients'. Cuntadani waxay shaqeysaa iyada oo la tixgelinayo in jirka maaddada uu leeyahay qaddar dufan urursan oo la heli karo si loo daboolo yaraanta kalooriga. Waxa ugu caqliga badan ee la sameeyo waxay noqon laheyd in la hubiyo in borotiinka la qaato qiyaastii 1g x miisaanka jirka oo lagu kabo dhaqdhaqaaqa jirka, si loo ilaaliyo cufnaanta caatada ah. Dhanka kale, saameynta dib-u-soo-celinta ayaa ah wax aan ka badneyn cunista mar kale, oo ka badan kalooriyada jidhku u baahan yahay, sidaa darteed cunnooyinka astaamahan oo ay ku xigto dib-u-habeyn cunto ma horseedi doonto saameyn xun oo loo yaqaan 'rebound effect'.
Way fiicantahay! Waxyaabaha qaar waan badalay waana raacay anigoon dhaafi karin 400 oo kaloori, waxaan lumiyay 5 kiilo 10-kii maalmood ee uguhoreeyay iyo 4 10 maalmood oo dheeri ah oo isku cunno ah !! Waxaan qorsheynayaa inaan raaco 10 maalmood oo dheeri ah si aan u dhameystiro bisha 🙂
Haddii aad rabto inaad lumiso miisaanka booqo xirfadle nafaqo leh.
Cuntooyinkan ayaa ah kuwo aan waxtar lahayn oo khatar ku ah jirkaaga.
Waxbarashada cuntada ayaa muhiim u ah guusha qorshaha cunitaankaaga. Idhagayso! waa iga talo mustaqbal xirfadle daryeel caafimaad.
Ku jawaab Catalina
Waa wax laga naxo in daabacaadda noocan ah ay heli karaan dadku!
Waa in laga warbixiyaa!
Qof bini aadam ah ma cuni karo cunnadan! Waxa kaliya ee lumay waxay noqon doonaan biyaha jirka, waqti badana kuma qaadan doonto soo kabsashadiisa. Kani ma shaqeynayo oo keliya, laakiin wuxuu khatar ku yahay caafimaadka mana haysto oggolaansho cilmiyeysan.
Booqashada takhtarka takhasuska leh iyo si wada jir ah u sawiraya cunno isku dheelitiran oo adiga iyo baahiyahaagu ay had iyo jeer u noqdaan xulashada ugu fiican
Sida iska cad nooc kasta oo cuntooyin ah oo lagu dhajiyay internetka.-
Ku jawaab Cyn
Waa cunto dhib badan maxaa yeelay si buuxda uma qancinayso nafaqooyinka lagama maarmaanka ah ee ay tahay inaan maalin walba cunno.
Aabeyaasha DHAMMAAN, HASADAAN kuwa Culeyska lumi kara
Ku jawaab ilaa del
Haa, ma haystaan ​​wax ka fiican oo ay ku darsadaan, ha faallo ka bixin.
Ku jawaab Reny
Cunnadan waxaa kaliya loogu talagalay dadka qaba BMI ka weyn 80, taasi waa, waxay qiyaastii yihiin 100 ilaa 150 kiilo oo aad u cayilan.
Violeta Chaparro A. dijo
Runtu waxay tahay inaan haysto dhibaatooyin daran oo ah 'dyslipidemia' waxna ma jiraan, xitaa dawooyinka, ayaa iga caawiyay inaan xakameeyo heerarka.
Kaliya leh cunto aan lahayn gluten ama lactose iyo miro yar, biyo badan si kastaba ha noqotee.
Waxaan rajeynayaa inay tani iga caawin doonto inaan helo.
Jawaab ku si Violeta Chaparro A
Marta Mora Santamaria dijo
Tusaalaha ugu fiican ee miisaanka oo yaraada ayaan la mid ahayn caafimaadka. Tani caafimaad ma aha oo waa khatar, jooji beenta internetka. Adiga oo ah arday caafimaad oo ah qof jimicsiga kujiray mudo dheer, hadaad rabto inaad miisaanka dhinto, cun cunno isku dheeli tiran, oo leh dufaan gaar ah oo dufan leh (ha ilaawin in dufanka ay lagama maarmaan yihiin laakiin kuwa caafimaadka qaba aan la dhergin ), Kaarboohaydraytyo caafimaad leh oo aan lahayn kalooriyo madhan, borotiin (inbadan oo aad rabto inaad hesho murqaha). Saldhigga cuntadaada ka dhig miro, khudradda iyo digiraha, kalluunka buluugga ah iyo, in kasta oo hilibka guduudan uu leeyahay borotiinno badan, hilibka cad had iyo jeer wuu ka caafimaad qabaa. Biyo ka dhig cabbitaankaaga ugu muhiimsan oo ka dhig cabbitaanka cabitaannada sonkorta leh ee aadka u sarreeya Kuwaas oo dhan oo ay weheliso hoos u dhaca kaloriinta iyo jimicsiga (shaqada xoog + wadnaha). Miisaanka caafimaadka oo yaraada had iyo jeer waa mid horumar leh oo lagu qanco, cunnadan halkaan lagu sharraxay ayaa ah uun saamayn "boom", waxay kaa dhigi doontaa inaad lumiso miisaanka hab aan caafimaad qabin dhowr maalmood ka dib wax walbana sideedii bay ahaanayaan. Uma qalanto in khatar la geliyo caafimaadkaaga.
Jawaab Marta Mora Santamaria
Toddobada waxtar ee qolofta qalalan